Nox ဖိုင်မန်နေဂျာ - Android အတွက်ဖိုင်ဖိုင်စူးစမ်းရှာဖွေသူ၊
ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » Nox ဖိုင်မန်နေဂျာ - ဖိုင်ရှာဖွေသူ၊
Nox ဖိုင်မန်နေဂျာ - ဖိုင်ရှာဖွေသူ၊ လုံခြုံ။ အကျိုးရှိရှိ APK
အားကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ interface နဲ့ Nox File Manager သည် Android သုံးစွဲသူများအားမိုဘိုင်းဖုန်းဖိုင်များကိုစီမံရန်နှင့်မီဒီယာအမျိုးအစားကိုကြည့်ရှုရန်ကူညီသည် ဗီဒီယိုများ၊ အော်ဒီယိုများ၊ ရုပ်ပုံများနှင့်အခြားအရာများစွာကဲ့သို့သော! သုံးစွဲသူများသည်သင်၏ကိုလည်းရယူနိုင်သည် SD ကဒ်ဖိုင်များကိုလှန်လှောရှာဖွေပါ၊ ဖန်တီးပါ၊ အမည်ပြောင်းပါ၊ ကူးယူပါ၊ ရွှေ့ပါ၊ ဖျက်ပါ။
【 NOX FILE MANAGER ပေါ်လွင်ချက်များ - 】
★ Google Drive တိမ်တိုက်သိုလှောင်မှုသို့ဝင်ရောက်ခြင်း
★ FTP မှတစ်ဆင့်ကွန်ပျူတာများမှဖိုင်သို့ကူးပြောင်းပါ
★ App manager နှင့်အတူ app အားလုံးကိုစီမံပါ
【 NOX FILE MANAGER ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်စွမ်းရည်များ - 】
Explorer ဖိုင် Explorer နှင့်အလိုအလျောက်အမျိုးအစားခွဲခြင်း
Nox File Manager သည်သင်၏ Android စက်များရှိဖိုင်များနှင့်ဖိုင်တွဲများအားလုံးကိုရယူနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်ဖုန်းများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ browsing၊ ကူးခြင်း၊ paste လုပ်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့်နာမည်ပြောင်းခြင်းစသည့် PC များနှင့်ဆင်တူသည်။ ဖုန်းတွင်းသိုလှောင်မှုနှင့် SD ကဒ်ရှိဖိုင်များကိုထောက်ပံ့သည်။ အသုံးပြုသူသည်ပုံများ၊ အသံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ အပလီကေးရှင်းများ၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဒေါင်းလုပ်များစသည့်အမျိုးအစားများအလိုက်ဖိုင်များကိုလည်းရှာဖွေနိုင်သည်။ Nox File Manager သည်သင်၏ဖိုင်များနှင့်ဖိုင်တွဲများကိုအမျိုးအစားနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများအရအလိုအလျောက်ခွဲခြားရန်ကူညီပေးသည်။
သင်၏ Google Drive ဖိုင်များကို Nox File Manager မှတဆင့် ဝင်ရောက်၍ စီမံခန့်ခွဲပါ။ သင်၏ Google Drive နှင့်စက်သိုလှောင်မှုအကြားဖိုင်များကိုရွှေ့ပါသို့မဟုတ်ပြောင်းပါ။ သင်၏ Google Drive မှဖိုင်များကိုဖန်တီးခြင်းနှင့်ဖွင့်ရန် Nox File Manager မှလည်းရနိုင်သည်။
ဖိုင်သိုလှောင်မှုတွင်သင်၏ဖိုင်များအတွက်နေရာမရှိတော့ပါ။ ၎င်းကိုသင်၏ကွန်ပျူတာထဲသို့ FTP (File Transfer Protocol) မှရွှေ့။ ၎င်းသည် pc မှတစ်ဆင့်သင်၏မိုဘိုင်းသို့ဖိုင်များကိုလှန်လှောကြည့်နိုင်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ သင်၏ FTP ဆာဗာသို့ဝင်ရောက်ပြီးသင်၏ဖိုင်များကိုစက်သိုလှောင်ရာမှ Nox File Manager မှတဆင့် FTP သို့အလွယ်တကူလွှဲပြောင်းပါ။
သင်၏ဓာတ်ပုံများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ဓာတ်ပုံမန်နေဂျာသည်ဤနေရာတွင်ရှိသည်။ Nox ဖိုင်မန်နေဂျာသည်သင်၏ဓါတ်ပုံများကိုနေ့စွဲနှင့်တည်နေရာအလိုက်ခွဲခြားနိုင်သည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဓာတ်ပုံများတင်ရန်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်ကိုလည်းဖန်တီးနိုင်သည်။
အချို့ဖိုင်များကိုအခြားသူများမြင်စေလိုပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုင် Locker လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်သင်၏ဖိုင်ကိုသော့ခတ်ပါ။ သင်၏ဖိုင်များကိုပုံစံချလုံခြုံရေးကိုသတ်မှတ်ပါ။ သင်၏ဖိုင်များကို Nox File Manager ဖြင့်လုံခြုံအောင်သိမ်းထားပါ။
Nox File Manager သည်အသုံးပြုသူများကိုမကြာခဏအသုံးပြုသောဖိုင်များနှင့်မကြာသေးမီကအသုံးပြုထားသောဖိုင်တွဲများကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပေးပြီး၊ သင်မကြာသေးမီကသင်လက်ခံရရှိ၊ ပြန်လည်စစ်ဆေးသို့မဟုတ်ပြုပြင်ထားသောဖိုင်အားလုံးကိုစာရင်းပြုသည်။ လျင်မြန်စွာအသုံးပြုနိုင်မှုစနစ်သည်အချိန်ကုန်သက်သာစေသည်။
🤖ထိပ်တန်း app မန်နေဂျာ
Nox File Manager သည် local devices များရှိ install လုပ်ထားသော applications များအားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူအား uninstall လုပ်ရန်၊ ဖွင့်ရန်သို့မဟုတ် app တစ်ခုချင်းစီ၏အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။
Nox File Manager သည်မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏သိုလှောင်မှုအသုံးပြုမှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိမ့်မည်။ ကြီးမားသော APK ကိုရှာဖွေပြီးဖိုင်များကိုထပ်မံကူးယူပြီးနေရာလွတ်ပေးရန်ဤဖိုင်များကိုဖျက်ခြင်းကိုထောက်ခံသည်။ အသုံးပြုသူများသည်ဒေသခံသိုလှောင်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်အမှိုက်ပုံးကိုပြန်လည်အသုံးပြုရန်၊ အသုံးမကျသည့်ဖိုင်များကိုရှင်းလင်းရန်နှင့်နေရာပိုရရန်ကူညီသည်
Nox ဖိုင်မန်နေဂျာသည်လူမှုရေးမီဒီယာ (ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ တွစ်တာစသည်ဖြင့်)၊ စာတိုနှင့်အီးမေးလ်များမှတဆင့်ကြီးမားသောဖိုင်များကိုမျှဝေရန်ခွင့်ပြုသည်။ ရုပ်ရှင်၊ တေးဂီတနှင့်အက်ပ်များကဲ့သို့သောမာလ်တီမီဒီယာဖိုင်များကိုအခြားသူများအားနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်မျှဝေပါ။
Nox ဖိုင်မန်နေဂျာသည်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုလုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားပြီးကိုယ်ရေးကိုယ်တာကာကွယ်မှုနှင့်အညီမည်သူကိုမျှမဝေမျှပါနှင့်။ သတင်းအချက်အလက်ပေါက်ကြားမှုအန္တရာယ်ကိုဖယ်ရှားပြီးသင်၏ဖိုင်များကိုလုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။
【 NOXFILEMANAGERR မှတ်စုများ - 】
personal ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက် (ဥပမာ - အသုံးပြုသူအမည်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်လိပ်စာ) ကိုပြုလုပ်မထားပါ။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ application ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်,5ကြယ်ပွဘယ်လောက်ရှိသလဲကျေးဇူးပြုပြီး!
အကြံပြုချက်များ၊ မေးခွန်းများသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကြားချင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင် Nox File Manager ကို install လုပ်၍ သင်၏ Facebook တွင် https://www.facebook.com/Nox-File-Manager-1946181218769092/ တွင်ထည့်သွင်းရန်သင့်အားကြိုဆိုပါသည်။
1- SD ကဒ်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူများသည် SD card မှဖိုင်များကိုကြည့်ခြင်း၊ ရွှေ့ခြင်း၊ encrypt လုပ်ခြင်း၊ ဝေမျှခြင်းနှင့်ကူးယူခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်
၂- cache ဖိုင်များ၊ ကျန်ရှိသော junk files နှင့် ad junk များကိုဖျက်ရန် cache cleanup feature ကိုထည့်ခဲ့သည်
5- cloud သိုလှောင်မှုအင်္ဂါရပ်၏ UE & UI ကို Optimized
Nox ဖိုင်မန်နေဂျာ - ဖိုင်ရှာဖွေသူ၊
13.11 ကို MB